σωζων - Yunanca - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: σωζων (Yunanca - Birmanca)
Εβοησαν, και ουδεις ο σωζων προς τον Κυριον, και δεν εισηκουσεν αυτων.
သူတို့သည် အော်ဟစ်ကြသောအခါ၊ ကယ်တင် သောသူမရှိ။ ထာဝရဘုရားကို အော်ဟစ်သော်လည်း ထူးတော်မမူ။
Θαυμαστωσον τα ελεη σου, συ ο σωζων τους ελπιζοντας επι σε εκ των επανισταμενων κατα της δεξιας σου.
ကိုယ်တော်ကို ခိုလှုံသောသူတို့ကို သူပုန်တို့လက် မှ၊ လက်ျာလက်တော်အားဖြင့် ကယ်နှုတ်တော်မူသော ဘုရား၊ ထူးဆန်းသော မေတ္တာကျေးဇူးတော်ကို ပြတော် မူပါ။
Λεγοντες, Ο Θεος εγκατελιπεν αυτον καταδιωξατε και πιασατε αυτον, διοτι δεν υπαρχει ο σωζων.
Περιεβλεψαν, αλλ' ουδεις ο σωζων εβοησαν προς τον Κυριον, και δεν εισηκουσεν αυτων.
သူတို့သည် အော်ဟစ်ကြသောအခါ ကယ်တင်သော သူမရှိ။ ထာဝရဘုရားကို အော်ဟစ်သော်လည်း ထူးတော်မမူ။
διοτι εν τω αγρω ευρηκεν αυτην, εφωναξεν η ηρραβωνισμενη νεα, αλλα δεν υπηρχεν ο σωζων αυτην.
အကြောင်းမူကား၊ ယောက်ျားသည် ထိုမိန်းမကို တော၌တွေ့၍ မိန်းမအော်ဟစ်သော်လည်း ကူညီသောသူ မရှိသောကြောင့်၊ ထိုအမှုသည် လူချင်းတယောက်ကို တယောက် ရန်ပြု၍ သတ်သောအမှုနှင့်တူ၏။
ငှက်သည် သားငယ်ကို အုပ်တတ်သကဲ့သို့၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားသည် ယေရှုရှ လင်မြို့ကို ကွယ်ကာတော်မူမည်။ ကွယ်ကာစောင့်မ၍ အပြစ်မပေး၊ ကယ်တင်တော်မူမည်။
Χαιρε σφοδρα, θυγατερ Σιων αλαλαζε, θυγατερ Ιερουσαλημ ιδου, ο βασιλευς σου ερχεται προς σε αυτος ειναι δικαιος και σωζων πραυς και καθημενος επι ονου και επι πωλου υιου υποζυγιου.
အိုဇိအုန်သတို့သမီး၊ အလွန်ဝမ်းမြောက်လော့။ အိုယေရုရှလင်မြို့သတို့သမီး၊ ကြွေးကြော်ကြလော့။ တရားသဖြင့် စီရင်၍ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သော သခင်၊ သင်၏အရှင်မင်းကြီးသည် မြည်းမနှင့် မြည်း ကလေးကို စီး၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော စိတ်နှင့် သင်ရှိရာသို့ ကြွလာတော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုလော့။
και θελεις ψηλαφα εν τω μεσω της ημερας, ως ο τυφλος ψηλαφα εν τω σκοτει, και δεν θελεις ευοδουσθαι εις τας οδους σου και θελεις εισθαι μονον καταδυναστευομενος και διαρπαζομενος πασας τας ημερας, και δεν θελει εισθαι ο σωζων.
မျက်စိကန်းသောသူသည် မှောင်မိုက်၌ စမ်း သပ်ရသကဲ့သို့၊ သင်သည် မွန်းတည့်အချိန်၌ပင် စမ်းသပ် ရလိမ့်မည်။ သင်ပြုသောအမှု၌ မအောင်ဘဲ ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ လုယူခြင်းကိုသာ ခံရလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ မကယ်တင် ရ။
Και δεν ητο ουδεις ο σωζων αυτην, διοτι ευρισκετο μακραν απο της Σιδωνος, και δεν ειχον συγκοινωνιαν με ουδενα εκειτο δε εν τη κοιλαδι της Βαιθ-ρεωβ. Και ωκοδομησαν πολιν και κατωκησαν εν αυτη.
ဇိဒုန်မြို့နှင့်ဝေးသောကြောင့်၎င်း၊ အဘယ်သူနှင့်မျှ အမှုမဆိုင်သောကြောင့်၎င်း၊ ကယ်နှုတ်သော သူမရှိ။ ထိုမြို့သည် ဗက်ရဟောဘမြို့အနားမှာရှိသော ချိုင့်၌ တည်၏။ ထိုအရပ်၌ မြို့သစ်ကိုတည်၍ နေကြ၏။
Ο βους σου θελει εισθαι εσφαγμενος ενωπιον σου, και δεν θελεις φαγει εξ αυτου ο ονος σου θελει αρπαχθη απ' εμπροσθεν σου και δεν θελει αποδοθη εις σε τα προβατα σου θελουσι παραδοθη εις τους εχθρους σου, και δεν θελει εισθαι εις σε ο σωζων.
သင့်နွားကို သင့်မျက်မှောက်၌ သတ်၍သေ သော်လည်း သင့်ကိုယ်တိုင်မစားရ။ သင့်မြည်းကို သင့်ရှေ့ မှောက်၌ အနိုင်အထက်ယူသွားပြီးမှ၊ နောက်တဖန်ပြန်၍ မပေးရ။ သင့်သိုးတို့ကို သင့်ရန်သူ၌ အပ်သောအခါ ကယ်နှုတ်သောသူမပေါ်မရှိရ။
Του οποιου αντιτυπον ον το βαπτισμα, σωζει και ημας την σημερον, ουχι αποβολη της ακαθαρσιας της σαρκος, αλλα μαρτυρια της αγαθης συνειδησεως εις Θεον, δια της αναστασεως του Ιησου Χριστου,
ထိုသို့သော ဥပမာအတိုင်း၊ ယခုတွင်ဗတ္တိဇံသည် ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူသောအားဖြင့်၊ ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏။ ဗတ္တိဇံဟုဆိုသော်၊ ကိုယ်ကာယ၏ အညစ်အကြေးဆေးကြောခြင်းကို မဆိုလို။ ကိုယ်ကို ကိုယ်သိသောစိတ်ကြည်လင်၍၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့၌ ဝန်ခံခြင်းကို ဆိုလိုသတည်း။
αλλους δε σωζετε μετα φοβου, αρπαζοντες αυτους εκ του πυρος, μισουντες και τον χιτωνα τον μεμολυσμενον απο της σαρκος.
ကိုယ်ကာယနှင့်ညစ်ညူးစွန်းကွက်သော အဝတ်ကိုပင် စက်ဆုပ်ရွံရှာ၍ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်တကွ၊ အချို့ တို့ကို မီးထဲမှ ဆယ်နှုတ်ကယ်တင်ကြလော့။
ထိုခရစ်တော်သည် လူဇာတိအဖြစ်၌ နေစဉ်ကာလ၊ သေခြင်းမှ ကယ်လွှတ်နိုင်တော်မူသောသူကို၊ ကြီးစွာသော ကြွေးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ဆုတောင်းပဌနာပြုသဖြင့်၊ ကြောက်ရွံရာအမှု၌ ချမ်းသာ ရသည်ဖြစ်၍၊
ထိုကြောင့်၊ အကြင်သူတို့သည် ယေရှုအားဖြင့် ဘုရားသခင့်အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏၊ ထိုသူတို့၏ အမှုကို ကိုယ်တော်သည် စောင့်လျက်၊ ကာလအစဉ် အသက်ရှင်သောကြောင့်၊ သူတို့ကို အစဉ်ကယ်တင်ခြင်း ငှါ တတ်နိုင်တော်မူ၏။
Ενω ετι υπηρχομεν, οι οφθαλμοι ημων απεκαμον, προσμενοντες την ματαιαν βοηθειαν ημων απεβλεψαμεν κεχηνοτες προς εθνος μη δυναμενον να σωζη.
ငါတို့သည်ရှိစဉ်တွင် မစမည့်သူကို မြော်လင့်၍ မမြင်ရကြ။ မကယ်တင်နိုင်သောလူမျိုးကို ကင်းစင်ပေါ် မှာ အကျိုးမရှိဘဲ စောင့်ကြပြီ။
Εως ποτε, Κυριε, θελω κραζει, και δεν θελεις εισακουει; θελω βοα προς σε, Αδικια και δεν θελεις σωζει;
အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ကြားတော် မမူဘဲ၊ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး အကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ရပါ မည်နည်း။ ကယ်တင်တော်မမူဘဲ အကျွန်ုပ်သည် အဓမ္မ အမှုကို ခံ၍၊ ရှေ့တော်၌ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး အော် ဟစ်ရပါမည်နည်း။
Τοτε βοωσι προς τον Κυριον εν τη θλιψει αυτων, και σωζει αυτους απο των αναγκων αυτων
ဆင်းရဲခံရသောအခါ ထာဝရဘုရားကို အော် ဟစ်၍၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခထဲက ကယ်တင်တော်မူ၏။
Εκπληροι την επιθυμιαν των φοβουμενων αυτον, και της κραυγης αυτων εισακουει και σωζει αυτους.
ကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏ အလိုကို ပြည့်စုံစေ တော်မူ၏။ ထိုသူတို့၏အော်ဟစ်ခြင်းကို ကြား၍ ကယ်တင်တော်မူ၏။
Και θελω σε καμει προς τουτον τον λαον οχυρον χαλκουν τειχος και θελουσι σε πολεμησει, αλλα δεν θελουσιν υπερισχυσει εναντιον σου, διοτι εγω ειμαι μετα σου δια να σε σωζω και να σε ελευθερονω, λεγει Κυριος.
ငါသည်လည်း သင့်ကို ဤလူမျိုးတဘက်၌ ခိုင်ခံ့ သော ကြေးဝါမြို့ရိုးဖြစ်စေမည်။ သူတို့သည် သင့်ကို တိုက်၍ မနိုင်ရကြ။ ငါသည် သင့်ကို နှုတ်ယူကယ်တင် ခြင်းငှါ သင့်ဘက်၌နေမည်။
Σωζου, ως δορκαδιον εκ χειρος του κυνηγου και ως πτηνον εκ χειρος του ιξευτου.
မုဆိုးလက်မှ သမင်ဒရယ်ကို၎င်း၊ ငှက်ကို၎င်း နှုတ်ရသကဲ့သို့ ကိုယ်ကိုနှုတ်လော့။
aapko trust nhi h (Hintçe>İngilizce)viu (Katalanca>İspanyolca)bespoke (İngilizce>İtalyanca)what' up (İngilizce>Hintçe)panel norm (İngilizce>Arapça)ana pakistani mafi khof min duniya (İngilizce>Arapça)ma che dici? (İtalyanca>İngilizce)böğürlerinizde (Türkçe>Maori)person in changer (İngilizce>Malayca)flugzeugunglücks (Almanca>İtalyanca)непреложны (Rusça>Esperanto)hindi 3x videoh (Hintçe>İngilizce)autobiograpiya (Tagalogca>İngilizce)পর্যন্ত (Bengalce>Arapça)takip ng talyasi in english (Tagalogca>İngilizce)рождаются (Rusça>İngilizce)hello friend (İngilizce>Almanca)cowok (Latince>İngilizce)duration of contract (İngilizce>Nepalce)nørgaardsvej (İngilizce>Fransızca)可以说是误导了 (Çince (Modern)>Tayca)perituri (Latince>İtalyanca)cyborgs (İngilizce>Türkçe)mujhe english nahi aati hai english (Hintçe>İngilizce)aur chahiye to bol (Hintçe>İngilizce)